Uncategorized Archives - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Maitiro ekuvandudza anoshamisa eCommerce app
Kugadzira yakabudirira eCommerce nharembozha app inoda imwe ongororo uye nekuchenjerera kuronga. Dzidza maitiro ekuvandudza inoshamisa eComm app
Nei Kushambadzira Kunze Kwekunze Kuchiri Kukosha muNyika Yezvakawanda?
5 Zvikonzero Nei Kushambadzira Kunobuda Kunoshanda: Unogona zvakare kuwana dzimwe nzira dzekushandisa dzekushambadzira dzinobuda kunze kune rako bhizinesi.
Funga izvi usati wasarudza yekubhadhara gateway yeapp yako
Kusarudza gedhi rekubhadhara reapp kunosanganisira kupfuura nemazhinji sarudzo. Heano nhanho nhanhatu gwara rekukubatsira iwe kunze mune ino maitiro
12 Kufunga kwakakosha Uchisarudza Big Data Technology Stack
Ziva izvo gumi nezviviri zvakakosha zvekuisa mundangariro paunenge uchisarudza iyo Big Data tekinoroji stack yeako projekiti. Nemaiyi akakosha pfungwa iwe unozokwanisa kuita sarudzo kwayo iwe tech stack.
Kutaurirana Commerce - Nei ichi chichava chinotevera chikuru chinhu
Kutaurirana kwekutengeserana - nei chiri chinhu chikuru kushandira vatengesi
Kukurukurirana kwekutsvaga uye maitiro avanoita SEO
Dzidza maitiro ekuwedzera kwekutsvaga kwekutaurirana kuri kuchinja mamiriro eSEO mumawebhusaiti
Kuvaka yako yega Uber yeX chikuva
Uber yakashandura hupfumi hwe-pa-kudiwa nenzira yekuti zano rekutanga rinogona kutsanangurwa zviri nyore se "Uber yeX" uko X chero basa raunopa uchishandisa iyo Uber modhi.
Dzidza kuti indasitiri yekushanya iri kushandisa sei mabhatani uye kuti vangabatsira sei
Muchinjikwa chikuva masisitimu emafoni ekushandisa
Apr 18 | zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
Muchinjikwa Platform App Kuvandudza Masystems - kuenzanisa uye zviitiko kana uchisarudza imwe pamusoro pevamwe.
Kuwedzera Kwechokwadi sechishandiso chinoshanda muDzidzo
Kuwedzera kwechokwadi kunoreva kuwedzera chaiko- nyika nharaunda nemakomputa- anogadzirwa sevhidhiyo, girafu, ruzha uye mamwe masvikiro.
Dzidziso - gadzira chishandiso uchishandisa Corona Sisitimu
Ichi chidzidzo chidiki pane Maitiro ekuvandudza maitiro akapusa uchishandisa Corona Sisitimu. Uku kungori kutanga.
T-Mobile, iyo kambani ichibuda neyekutanga Google Android chikuva foni, iyo HTC G1, yakaburitsa G1 Emulator Iyo webhusaiti inopa inotonhorera.